Izifundo Ezi-7 Ozifundile Ekukhuthazeni Ukubhala Kwakho | Martech Zone
NgeSonto, Septhemba 25, 2011 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Sijabule kakhulu ukubekisa uJo-Anne Vandermeulen ku- Umbukiso womsakazo we-Marketing Tech kepha cishe imizuzu engama-20 singene, ukungena kwethu kwi-Intanethi kwehlile futhi bekufanele siwuyeke umbukiso. Kwakudumaza ngoba sasithola izeluleko ezinhle kakhulu kuJo-Anne.
UJo-Anne ungungoti wezokukhushulwa ozishicilela. Ngemuva kokuthatha umhlalaphansi njengothisha, ubhale uchungechunge lwezincwadi… futhi ekuqhubekeni wafunda ukuthi angakwazi kanjani ukukhuthazwa kwezincwadi zakhe. Manje unikezele ibhizinisi lakhe, yena blog, ngamunye podcast, nencwadi yakhe entsha yokusiza ababhali bathuthukise ukubhala kwabo.
Ngifisa sengathi ngabe ngahlangana noJo-Anne eminyakeni embalwa eyedlule… ngaphambi kokubhala Ukubhuloga Kwebhizinisi KwamaDummies. Akukona ukuthi incwadi ayithengisi ngokungaguquguquki - kungukuthi angikholwa ukuthi ngenze konke engingakwenza lapho ngikhangisa le ncwadi. Kanye nokufaka kukaJo-Anne, ngibeke lolu hlu lwezifundo ndawonye.
Noma ngabe uyazishicilela, uhamba ngefemu encane yokushicilela, noma ukushicilela kwendabuko… uzoba nesibopho sokuzimaketha kanye nezincwadi zakho. Uyakwazi ukukwenza lokhu ngokwakho, noma ngabe awunazo iziqu zokumaketha noma ufisa ukufuna umkhangisi oqeqeshiwe, KODWA, kuzothatha isikhathi namandla - nolwazi.
Yethula ibhulogi kuyisidingo. Ziveze ngokunembile njengochwepheshe, nikela ngokuqukethwe okubalulekile izibukeli zakho ezingakuthatha, futhi unikeze futhi unikeze okunye okuningi. Yiba neqiniso, wamukele ukuxhumana nezithameli zakho. Futhi-ke - ungakhohlwa ukubeka ucingo ezenzweni kubha eseceleni encwadini yakho (s) ngenkinobho yokuthenga ecacile nezixhumanisi ezisebenzayo!
Ukuba khona ezinkundleni zokuxhumana ingumpompi obalulekile wokuthola ukuvezwa KOMKHULU (sikhuluma ngamalungu ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.2 kuFacebook kuphela ngonyaka ka-2012. Lokho kungukuningi kakhulu lapho-ke oyoke uphuphe ukuxhuma khona lapho kusayinwa incwadi). Khomba izethameli zakho, lungela ukuzenza wena (nezincwadi zakho) zibonakale kumanethiwekhi amaningi ngangokunokwenzeka, futhi usebenzise isikhathi sakho ukudala ubudlelwano obuzogcina buvulela umnyango emathubeni amaningi.
Ukunyuswa kwencwadi yakho kuqala usuku lapho unombono khona ngencwadi! Ukwakha ukulindela nezithameli zakho kubalulekile. Baningi kakhulu abantu (kufaka phakathi nathi) abalinda incwadi ize iphrinte ngaphambi kokuthi bayithuthukise. Silahlekelwe yisikhathi esiningi nomfutho kulokhu! Ngifisa sengathi ngabe ngabe siphushe ama-oda wangaphambilini futhi saba nesayithi ngokushesha okukhulu.
Njengesipika, ezinye izikhulumi engikanye nazo zikhuphule ukuthengiswa kwezincwadi futhi zasabalalisa ezinye izincwadi eziningi ngo- ngicela izincwadi zokuthengwa komcimbi kwababekhona kunokuba ukhokhe imali yokukhuluma. Lo ngumbono omuhle ngoba usebenza emazingeni ama-3… ukukuhlanganisa nencwadi, ukuthengisa izincwadi eziningi, nokuba nezithameli zabafundi abaphumayo bakhulume ngencwadi leyo. Ukunqoba, ukunqoba, ukunqoba!
Ukubuyekeza kunendaba! Thumela amakhophi encwadi kwezinye iziphathimandla embonini yakho bese cela impendulo yabo ethembekile nokubuyekezwa ku-Amazon nezinye izingosi zokubuyekeza izincwadi. Labo baphathi abanamabhulogi bavame ukubhala okuthunyelwe kwebhulogi mayelana nencwadi yakho futhi bakusize ukuyithuthukisa.
Nyusa abafundi bakho! Encwadini yethu, besinakho amavidiyo asuka eNingizimu Afrika kuya ku isithombe esivela ku-Chief Blogger we-eBay, URichard Brewer-Hay, evikini eledlule! Abafundi bakho bafuna ukuxhumana siqu nawe njengombhali - ngakho-ke qiniseka ukuthi usebenzisa inzuzo futhi wakhe lobo budlelwano lapho kuvela amathuba!
Qiniseka ukuthi uthatha ikhophi yencwadi entsha kaJo-Anne, Amathiphu Wokukhuthaza we-Premium Wababhali.
Ukusebenziseka Kokusesha Kwasendaweni Akuqali Ukusebenziseka Kwezwe Noma Komhlaba Wonke
Sep 25, 2011 ngo-10: 28 PM
Inombolo yesihlanu yenza umqondo omkhulu kimi - ngiyabonga. Bengingeke ngicabange ngayo ngingedwa.